Olee otú iji Spotify search na otú ịchọ playlist
Olee otú Jiri Spotify Search arụ na otú Chọọ Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Otu n'ime isi atụmatụ nke Spotify bụ search nhọrọ dị. Na search nhọrọ inaha ọrụ na-agọzi na mfe nhọrọ nke nnụcha searches na-ege ntị ọ bụla music n'ime sekọnd. Search nhọrọ dabeere na genre, afọ na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka ka ọ dịkwuo mfe na ndị ọzọ a nụchara anụcha.
Part 1: Olee ịchọ music on Spotify
Nkebi nke 2: Atụmatụ maka Spotify playlist search
Iji chọta music on Spotify, ndị ezigbo mkpa bụ nchọgharị nke music faịlụ na ya. Na Search results kewaa track, album, ma ọ bụ na-ese dabeere edemede, ị nwere ike mfe ime ka search nke songs dabeere na gị likings. Ndị na-esonụ kọwaa dum usoro nke nyocharaworo music on Spotify.
Malite na iji kọmputa ede ihe na search igbe
Ị ga-enweta a Top Hit N'ihi ya, sochiri top ọkụ maka search term.From na dobe-ala ndepụta, họrọ nhọrọ 'Gosi na ihe nile results' iji hụ a zuru ndepụta nke search results tinyere na-arụpụta kewaa Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Artists, na Albums.In ikpe ị na-akpali òké n'elu artist aha ke Artist kọlụm, nchegbu aha atụgharịa n'ime a clickable njikọ
Na ịpị a njikọ-ewe gị na-ese na profaịlụ page. E ị pụrụ ịhụ ihe ọmụma nile na nnyocha page. Site na nke a na-ele, ị nwere ike pịa ọ bụla album aha na ike na-aga ya onye page. N'ihi ya, i nwere ike ịmalite ịkpọ egwu dum album si ya isi Spotify peeji site abụọ-ịpị mbụ song, na mgbe ahụ Spotify na arụ orụ di egwu iji.
Na Spotify playlist search, ị nwere ike ezi mfe nụchaa ọchụchọ gị na a ụzọ ka mma isi. Na Search nhọrọ dị, Spotify pụrụ nnọọ mfe nụchaa music faịlụ dabeere na query usoro na pụrụ nnọọ mfe chee na faịlụ ọchịchọ gị. Ebe a bụ ụfọdụ nke Atụmatụ na usoro maka otú iji Spotify Playlist Search.
Were ahụ, olee ebe ị banyere okwu 'na Madonna' ma ị na-achọghị ịchọ madonna, n'ihi na ị na-agaghị achọ onye na-ese Madonna bụ onye a ererimbot ama na akara ngosi na music ụwa, ma, kama na-achọ songs ebe utu aha na-agụnye okwu ahụ 'madonna'. Mgbe ahụ, na ikpe, ị nwere ike ịchọ 'aha: madonna', nke ga-enye gị chọrọ search query.
N'otu aka ahụ, i nwere ike ịchọ 'album: madonna' na 'Artist: madonna' iji na-ahụ nanị kenha albums na nka, karị.
Iji n'ihu nụchaa ọchụchọ gị dabeere na ndị ọzọ akụkụ, ị pụrụ ịchọta faịlụ ahụ. Ịnwere ike ịchọ maka otu afọ, a nso nke afọ ma ọ bụ a genre: 'afọ: 1969', 'afọ: 1998-2003' ma ọ bụ 'genre: nkpuru obi'.
Ọbụna i nwere ike n'ụzọ ezi uche na-eji n'ịgwa ịchọ Tekno site na mmalite 90s ma ọ bụ Ekele Nwụrụ Anwụ songs si mbubreyo 60s: 'genre: Tekno afọ: 1990-1995' ma ọ bụ 'na-ese:' ekele nwụrụ anwụ 'afọ: 1965-1970'.
Genre: Ngosipụta music na genre kenha isiokwu. Lee ndepụta niile Genres, ihe atụ genre: Bad, genre: "oké nkume na mpịakọta".
Label: Ngosipụta music tọhapụrụ site labeelu kenha isiokwu.
isrc: egosiputa tracks kenha nọmba NJ dị ka International Standard ndekọ Usoro.
UPC: Ngosipụta albums kenha nọmba NJ dị ka Universal Product Usoro.
mkpado: ọhụrụ - Nsuso kasị ndondo kwukwara albums. 'Tag' agaghị alaghachikwute results ihe ọ bụla ọzọ Keywords.
Ị pụrụ ọbụna chọọ na-esonụ otú:
Kyuss NA Green - anatara results na Keywords 'Kyuss' na 'Green'
Zeppelin MA Ọ BỤ Floyd - anatara results na Keywords 'Zeppelin' ma ọ bụ 'Floyd'
Metallica BỤGHỊ Iwe - anatara niile Metallica tracks ma e wezụga na okwu 'iwe'
The search nhọrọ dị na Spotify bụ kwa dị ike dị otú ahụ n'ụzọ na ọ na-enye ohere ka ndị mmadụ iyo ihe ọ bụla, dabere na ha gbara ajụjụ. Ọ bụla pụta ga-ẹdụk n'ụzọ ọ bụla na enyemaka nke Search nhọrọ nke Spotify, pụta pụrụ ịdị nnọọ irè na ngwa ngwa-emepụta dabeere na ọchịchọ na chọrọ.
Dị nnọọ ka na a Google search, i nwere ike iji search modifiers iji na-eji Spotify n'ụzọ dị irè na inyere gị aka ịchọta kpọmkwem ihe ị na-achọ na Spotify. Dị nnọọ aga search mmanya na nanị pịnye ọ bụla search query na nke ga-eweta ihe niile n'ihi ndị metụtara search query. Ị nwere ike nnọọ mfe ịhụ nka, albums, listi ọkpụkpọ, profaịlụ, na fọrọ nke nta mgbe agwụcha ndepụta nke songs na tracks.
Iji mee ka ị na-aghọta search nhọrọ, ebe a bụ ụfọdụ nke snapshots na akara nke nghọta zuru ezu. Were a anya na ha.
Spotify Search bụ otu n'ime ihe ndị kasị elu search nhọrọ ugbu a na ọ bụla Music gụgharia ngwa. The otu n'ime ndị kasị dị ike gụgharia ọrụ na-enye ohere search nhọrọ na-niile kwere omume ụzọ dabere na ọrụ 'achọ na ike song nwere ike ẹdụk dabeere na genre, afọ, nka na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihi ya, na enyemaka nke search nhọrọ, ọrụ n'ụwa nile nwere ike inweta otu nke kasị mma ọrụ n'ụdị Spotify.
Spotify maka Mac? Nke a Guide solves All Your Issues
Atụmatụ maka Spotify Ndenye aha
Spotify Top Songs maka 2014 na 2015
Atụmatụ banyere Spotify Update
> Resource> Spotify> Olee otú Jiri Spotify Search arụ na Olee-Chọọ Ndetuta egwu ọkpụkpọ